आँखाको समस्या आएमा तपाईं जाँचको लागि अस्पताल, क्लिनिक, स्वस्थ्यचौकी, चस्मा पसल इत्यादि ठाउँमा जानुहुन्छ। जाँच हुन्छ, तर धेरैलाई थाहै हुँदैन, जाँच गर्ने को हुन् र उनको विज्ञता के हो। डाक्टर नै नभई केहीले त डाक्टर हुँ भनेर बिरामीलाई भ्रममा पारेका उदाहरण पनि प्रशस्त पाइन्छन्। ...
सरकारले लक्षण नभएकाहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे नरहेको पत्ता लगाउन गरिने आरटि पिसआर परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितीमा आइतबार बसेको मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको बैठकले लक्षण देखिएकाको मात्र पिसिआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। ...
नेपालिलाई क्यान्सर रोग लाग्नुको प्रमुख कारण के हो ? मेडिकल अन्कोलोजिष्ट डा. सुदिप श्रेष्ठको लेख
विश्वमा अहिले क्यान्सर माहामारीको रुपमा देखा परेको छ । बद्लिदो जीवनशैली नै यसको मुख्य कारण हो । विशेषगरी, धुवाँधुलो, वायु प्रदुषण, औद्योगीकरण (जहाँ रसायनको प्रयोग बढी हुन्छ) लगायतका कारण पनि विश्वमा क्यान्सर रोगको जोखिम बढ्ने क्रममा छ । नेपालमा क्यान्सर रोग भयावह अवस्थामा छ । ...
उच्च रक्त चाप अहिले धेरैमा देखिरहेको समस्या हो । विभिन्न कारणले गर्दा यो समस्या डरलाग्दो रुपमा बढ्न थालेको छ । यो बढ्नुको कारण मध्य एक खानपान र अर्को वर्तमान जीवनशैली हो । ...
विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थय भनेको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रुपमा स्वास्थ्य रहनु हो भन्छ । तर नेपालमा भने अहिलेसम्म स्वास्थ्य भनेको शारीरिक मात्रै हो भन्ने बुझाई छ । ...
डिप्रेशन एक जटिल मानसिक रोग हो, जो धेरै मानिसहरुमा हुनसक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ) पछिल्लो तथ्यांकले विश्वभर करीब हसाढे तीन करोड मानिसहरु डिप्रेशनबाट प्रभावित भएको देखाएको छ भने बार्षिक रुपमा करीब ८० हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । ...